Yan Aung: Blogger Book အတွက် စာမူများပို့ပေးကြပါ…
စာမူအသစ်တွေ တင်ပေးထားတယ်ဗျ. http://www.mmblogbook2.blogspot.com မှာ ရှိတယ်. အားရင် သွားဖတ်လိုက်ကြဦးနော်. စာရေးကောင်းတဲ့ Blogger တွေရဲ့ စာမူတွေကို စုစည်းဖော်ပြ ပေးထားတာ ဆိုတော့ ဖတ်ရတာ တန်ပါလိမ့်မယ်..
ကျွန်တော့်ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်လည်း စာမူတွေ ပို့ချင်သပဆိုရင် mmblogbook@gmail.com ကို ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်. စာအုပ်ထုတ်ဝေဖို့ အစီအစဉ်က စတင်နေပါပြီ. ပိုက်ဆံတွေလည်း စတင်ကောက်ခံနေပါပြီ. တစ်ယောက်ကို ၃ သောင်းလောက်ထည့်ဝင်စေချင်ပေမယ့် လိုအပ်တဲ့ Amount မရရင်လည်း ပြဿနာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ August Deadline မှာ ထွက်နိုင်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားသွားမှာပါ. လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏအတွက် ကျွန်တော်တို့ အမာခံ Blogger တစ်ချို့က ကိုယ့်အိတ်ထဲက ခဏစိုက်ပေးထားကြ ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်အပါအ၀င် အမာခံ ၅ ယောက်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က publisher ပုံစံမျိုးနေရာကနေ ယူသွားမှာပါ. ဒီတော့ ပိုက်ဆံကိစ္စထက် စာမူကိစ္စကို ပိုပြီး အာရုံစိုက်နေပါတယ်။ ဘယ်သူမဆို ရေးပို့နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ရိုက်နှိပ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်စာမူကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ အရင်ဆုံး censor ဖြတ်စေချင်ပါတယ်. ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးထားတဲ့ email address ကို ပို့ပေးလိုက်ပါ။
မကြာခင် စာမူရွေးချယ်စိစစ်ရေးကို စတင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။